Khudbadihii Madaxda JWXO oo Jawi wanaagsan ku soo gabagaboobay. | ogaden24
Khudbadihii Madaxda JWXO oo Jawi wanaagsan ku soo gabagaboobay.
Waxaa garoonka Kubada cagta magalada JIG JIGA sifiican ugu soo dhamaaday khudbadihihii masuuliyiinta JWXO iyo Marti sharaftii lasocotay.
xaflada soodhawaynata masuuliyiinta JWXO oo ay dad aad ubadan kasoo qayb galeen ayaa si habsami leh usocotay, waxaana hadalo qiiro Leh kasoo jeediyay, gudoomiyaha JWXO Admiral mohamed Cumar Cismaan oo sheegay in halganlii dheeraa ee shacabka somalida ogadenya soogalay meel fican marayo lanasii xoojin hayo iyadoo hab nabad galyo loomarayo.
sidookale waxaa hadlay xoghaya guud ee JWXO Cabdiraxmaan sheekh mahdi waxuuma dhankiisa sheegay in hadii halganka qalinka ah xoriyad lagu gaadhi waayo ay marlabaad qoriga qaadayaan si looxaqoijiyo xoriyada ogadenya.
dhanka kale waxaa khudbad aad uqiima badan soo jeediyay madaxwaynaha Somali state mudane Mustafa Muxamed cumar oo markuu hadlayay indhihiisa ilin iyo qiiro laga dheehan hayay.
khudbada madaxda iyo marti sharafka xaflada kasoo qaybgalay ayaa siwanaagsan usotocotay waxaana garoonka kubada cagta Jig Jiga soo buux dhaafiyay boqolal kun oo shacab ah kuwaas oo kulabisan calamada iyo astaamaha Jabhada ONLF.
Xaflada ayaa waxay hada kusoo dhamaaday si habsami ah waxaana idii soo gudbin doonaa hadii eebe yidhaahdo warbixinta oo dhamaystiran iyo muuqaalo tayo leh.